"Perfect"I foundalove for meDarling, just dive right in and follow my leadWell, I foundagirl, beautiful and sweetOh, I never knew you were the someone waiting for me'Cause we were just kids when we fell in loveNot knowing what it wasI will not give you up this timeBut darling, just kiss me slowYour heart is all I ownAnd in your eyes you're hold...
Visits : 4351
ဆာဗာတွေ ဟက်ခံခဲ့ရပေမယ့်လည်း အချက်အလက် ပေါက်ကြားမှုမရှိကြောင်း Apple ထုတ်ပြန်
သြစတြေးလျ ဆယ်ကျော်သက် အထက်တန်းကျောင်းသားတစ်ယောက်ဟာ Apple ဆာဗာတွေကို ဟက်ပြီး အချက်အလက် 90 GB ကို download လုပ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ် ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက် အဆိုပါဖြစ်ရပ်ကြောင့် သုံးစွဲသူတွေရဲ့ ကိုယ်ရေးအချက်အလက် ပေါက်ကြားမှုတွေနဲ့ ထိန်းချုပ်ခံရမှုတွေ မရှိကြောင်း Apple က ထုတ်ပြန်ချက်တစ်စောင်နဲ့ အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။အသက် ၁၆ နှစ်အရွယ် သြစတြေးလျနိုင်ငံသားဟာ အဓိကက...
Trans-Pacific View author Mercy Kuo regularly engages subject-matter experts, policy practitioners and strategic thinkers across the globe for their diverse insights into the U.S. Asia policy. This conversation with Gary Hufbauer – nonresident senior fellow at the Peterson Institute for International Economics and most recently the Instit...
Visits : 4165
ဟောလိဝုဒ်ရုပ်ရှင်၊ မဂ္ဂဇင်းအဖုံးတွေနဲ့ သတင်းစာတွေရဲ့ ဖော်ပြချက်တွေကြောင့် စက်ပစ္စည်းကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနဲ့ လူသားအရင်းအမြစ်ကြားစိန်ခေါ်မှုကို လူအများက စိတ်ဝင်စားနေကြပါတယ်။ အဆိုးမြင်သူတွေကတော့ စက်ပစ္စည်းကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးမှုဟာ အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်စေနိုင်ပြီး ဥပဒေတွေကိုချိုးဖောက်ရာရောက်စေတဲ့အပြင် စစ်ပွဲတွေပါဖြစ်လာနိုင်မယ်လို့ ကြိုတင်ဟောကိန်းထုတ်ကြပါတယ်။ အဲဒ...
Visits : 3779
Visits : 4042
127 - 132 of ( 154 ) records